‘फूलफूलमा पातपातमा’ होस् वा ‘उकाली ओराली गर्दै’ अथवा ‘उडूँ कि गुडूँ म’, यीलगायत धेरै लोकप्रिय र चर्चित नेपाली चलचित्रका गीत तथा आधुनिक गीतहरूमा सुमधुर धून भर्ने शिल्पी हुन् शक्ति बल्लभ ।
२०४७ सालमा पहिलो पटक चलचित्र ‘आँधीबेहरी’को उल्लिखित ‘उडूँ कि गुडूँ म’मा सङ्गीत गरेर चलचित्र सङ्गीतमा प्रवेश गरेका शक्ति बल्लभ त्यसयता झण्डै एक दशक नेपाली चलचित्र सङ्गीतमा एकछत्रजसो जमे ।
त्यसबेलाका चर्चित सङ्गीतकार रन्जित गजमेरसँग कुम जोडेर सिर्जनशील प्रतिस्पर्धामा भिडेका शक्ति बल्लभ यति प्रिय बने चलचित्र सङ्गीतमा कि उनी नेपाली चलचित्र सङ्गीतका त्यस समयका ‘बादशाह’ जस्तै कहलिए ।
उसो त शक्ति बल्लभले नेपाली सङ्गीतमा गजललाई स्थापित गर्नमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।
उनै नेपाली सङ्गीतका ‘शक्ति’ अर्थात् शक्ति बल्लभको समग्र व्यक्तित्व आजको ‘व्यक्तित्व’ स्तम्भमा प्रस्तुत गरेका छौँ ।
शक्ति बल्लभको जन्म दोलखा जिल्लाको सदरमुकाम चरिकोटमा २३ माघ २०१५ मा भएको हो । बाजे, बाबुको पुस्तैनी व्यवसाय व्यापार थियो । त्यस समयका राम्रै व्यापारी हुन् उनका बाबुबाजे ।
भक्तपुरका नेवार बाजेहरू व्यापारकै क्रममा दोलखा पुगेका बताउँछन् शक्ति । त्यहीँ व्यापारमा जमेर लामो समयदेखि बस्दै आएको हो शक्तिको परिवार ।
एकातिर व्यापार, अर्कातिर जग्गा जमिन पनि राम्रै भएका उनलाई हुर्किन, पढ्न कुनै समस्या परेन । भन्छन्, ‘पारिवारिक आर्थिक अवस्था मध्यम थियो । खान, लगाउन र पढ्न खासै अप्ठ्यारो भएन ।’
त्यसबेलाको चरिकोट बजारको व्यवस्थापनमा समेत उनका बाबुबाजेको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको शक्ति बताउँछन् ।
उनले बाल्यकालमा खेल्ने भनेको कपडाको भकुण्डो, गुच्चा र डण्डीबियो हुन् । अझ उनको रुचि भने गुच्चा र भकुण्डोमा बढी भएको बताउँछन् ।
गुच्चा खेल्नु नराम्रो मानिन्थ्यो उसबेला पनि । कोही अभिभावक वा शिक्षकले गुच्चा खेलेको देखेमा धुलाइ पाइहालिन्थ्यो । यस्तै घटना उनले पनि भोगेका छन् गुच्चा खेल्दा ।
उनी विद्यालय जान निकै अप्ठ्यारो मान्थे बच्चामा । आमाले भन्नुहुन्थ्यो रे, ‘विद्यालय पुर्‍याएर घर आइपुगेकी छुइनँ, पछिपछि आइपुग्थिस् ।’
शक्तिले कखरा सिक्ने वा अक्षरारम्भ घरमै बुबाबाट धुलो माटोमा गरे । ५ वर्षको भएपछि उनी कालिञ्चोक मिडिल स्कुलमा भर्ना भए । ७ कक्षासम्म त्यहाँ पढे र ८ कक्षादेखि भीम पब्लिक हाइस्कुलमा गए । त्यही हाइस्कुलबाट २०३१ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे ।
उनी त्यस समयका मध्यम स्तरका विद्यार्थी थिए ।
एकातिर व्यापारी परिवार, आर्थिक रूपले राम्रै अवस्था, अर्कातिर छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोचका बुबाआमा, उनलाई पढाइमा कतै ठेस लाग्ने अवस्था थिएन ।
एसएलसी पूरा गरेपछि उनी क्याम्पस पढ्न आए काठमाडौं । काठमाडौंका २ वटा क्याम्पस रत्नराज्यलक्ष्मी र सरस्वतीमा मानविकी सङ्कायका लागि प्रवेश परीक्षा दिए ।
तर, रमाइलो भयो । उनको नाम जनकपुरको रामसागर क्याम्पसका लागि निस्कियो ।
चकित परे शक्ति- ‘काठमाडौंका लागि दिइएको प्रवेश परीक्षामा नाम कसरी जनकपुरका लागि ?’
नाम त्यहाँका लागि निस्किएपछि जानै पर्‍यो कि त पढाइ रोक्नुपर्‍यो ।
उनी जनकपुर गए ।
अझ नरमाइलो त त्यसबेला भयो उनलाई, जब सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसेसम्म पैदल हिँडेर आऊ, ट्रक वा कहिलेकाहीँ पाइने बसमा चढेर काठमाडौं छिर अनि बाइरोडको बाटो हुँदै जनकपुरको यात्रा गर !
‘प्रवेश परीक्षामा कापी जाँच्नेलाई के थाहा कि दोलखाबाट जनकपुर जानु महाभारत थियो त्यसबेला’, शक्ति भन्छन्, ‘मेरो नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जनकपुर अञ्चल, दोलखा जिल्ला भएकाले कापी जाँच्नेले जनकपुर नै सजिलो होला भनेर उतै पठाएछ ।’
उनी पहिलो सेमेस्टरसम्म अर्थात् ६ महिना जनकपुर गएरै पढे । त्यसपछि पाटन संयुक्त क्याम्पसमा ट्रान्सफर गरेर आए ।
पहाडमा जन्मे हुर्केको ठिटो पहिलो पटक तराई पुगेको थियो । रमाइलो त लागेको थियो नै तर घरबाट धेरै टाढा बस्नु उपयुक्त ठानेनन् शक्तिले ।
आईए २०३४ सालमा पूरा गरे उनले । त्यहीबेला देशमा राजनीतिक आन्दोलनको राप बढिरहेको थियो । उनले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा बीए भर्ना त गरे तर जनमतसङ्ग्रहको भुङ्ग्रोमा परेको देशमा समग्र विद्यार्थी, पेसाकर्मी, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी सबैजसो आन्दोलनमा होमिएको समयमा पठनपाठनमा असर पर्नु स्वाभाविक थियो ।
‘जनमतसङ्ग्रहको रापले परीक्षा २०३९-०४० तिर धकेलियो’, शक्ति भन्छन्, ‘अझ त्रिचन्द्र क्याम्पस भन्नेवित्तिकै राजनीतिक सङ्गठनको अखडा थियो ।’
आजका केही चर्चित नेताहरूलाई शक्तिले त्यहीँ अर्थात् त्रिचन्द्रमै देखेका हुन् र उनीहरूका धेरैजसो भाषण सुनेका पनि ।
उनलाई त्यसबेला उनीहरूका भाषण, उनीहरूको फुर्ती र ओज देख्दा देशमा यिनलेचाहिँ केही पक्कै गर्लान् भन्ने थियो । तर, अन्त्यमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका मात्र पाए राजनीतिमा ।
उसो त शक्तिलाई राजनीतिप्रति मोह कहिल्यै जागेन । जब क्याम्पसमा भाषण भुषण सुरु हुन्थ्यो, शक्ति त्रिचन्द्र नजिकै कमलपोखरीमा रहेको आफ्नो डेरातिर हानिन्थे ।
त्यही डेरामा जमघट हुन्थ्यो- रविन शर्मा, उमेश पाण्डे, प्रकाश अधिकारी, राजेन्द्र पौडेललगायतको ।
हारमोनियममा औँला दौडिन्थे शक्तिका, रविनको गला खुल्थ्यो, प्रकाश र राजेन्द्र शब्दका वर्षा गर्थे- गीतका ।
यसरी लामो समय उनीहरूले त्यसबेला सिर्जनशील समय व्यतीत गरे ।
उनले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर भर्ना त गरे तर पूरा गरेनन् ।
जागिर : कृषि बैंकमै ३ दशक
२०४० सालमै कृषि विकास बैंकमा अधिकृतका लागि परीक्षा दिए शक्तिले । पास पनि भए तर नियुक्ति भने ३ वर्षपछि २०४३ सालमा मात्र पाए ।
उनी जागिर सुरु गर्दासम्म राम्रा सङ्गीतकारमा गनिइसकेका थिए । धेरैले उनलाई कुशल सङ्गीतकारका रूपमा चिनिसकेका थिए ।
यही उनको विशेष प्रतिभा अर्थात् सङ्गीतकार छबि उनको जागिरे जीवनमा पनि सहयोगी बन्यो ।
सङ्गीतकार भएकै कारण उनीसँगै अधिकृतमा नाम निकाल्ने २ दर्जनभन्दा बढी साथीहरू काठमाडौंबाहिर पदस्थापन भए भने शक्ति काठमाडौंमै रहे ।
उनी सुरु पदस्थापनदेखि १० वर्षसम्म कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालयमै रहे । त्यसपछि सेकेण्ड क्लास अफिसरमा बढुवा भएर उनी जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय शाखा प्रमुख भएर गए । शक्ति २ वर्षसम्म जनकपुर बसे ।
त्यसपछि पुनः काठमाडौं आए र न्युरोड शाखामा ३ वर्ष काम गरे । पुनः प्रधान कार्यालयमा ८ वर्ष काम गरे शक्तिले ।
२०६९ सालमा पुनः बढुवा भयो शक्तिको । अब प्रथम श्रेणीका अधिकृत अथवा फर्स्ट क्लास अफिसर बने । यसपछि उनी क्षेत्रीय निर्देशक बनेर धनगढी पुगे । त्यहाँ २ वर्ष बसेपछि भैरहवा आए र एक वर्ष त्यहाँ निर्देशक बने ।
२०७१ मा पुनः काठमाडौं आए अनि ठमेल र काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रधान कार्यालयमा बसेर सेवा निवृत्त भए ।
जागिरले संस्कार दियो, जीवन सहज बनायो
शक्ति झण्डै ३ दशकको आफ्नो जागिरे जीवनबाट आफूले संस्कार सिकेको बताउँछन् । जिम्मेवारीबोधले मान्छेलाई झनै सभ्य र सुसंस्कृत बनाउने र संस्कार दिने बताउँछन् उनी ।
‘जागिरले संस्कार मात्र दिएन मलाई, अनुशासन पनि सिकायो’, शक्ति भन्छन्, ‘कुर्सीमा बसेर केके गर्नुहुन्छ, केके गर्नुहुँदैन भन्नेमा बडो सचेत हुन जरुरी छ, त्यो जागिरले दिएको छ ।’
उसो त शक्ति जागिरले आफूलाई जीवन चलाउन सहज बनाएको पनि बताउँछन् । नियमित वा स्थायी जागिर भएकै कारण आफ्नो परिवार र दैनिकी चलाउन सहज भएको उनको भनाइ छ ।
जागिरकै कारण आफू निरन्तर र समर्पित भएर सङ्गीत साधनामा लाग्न सकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
‘यदि जागिर नभएको भए म अन्य कुनै काम त गर्थें नै होला, नभए पनि बाबुबाजेको व्यापार धान्ने थिएँ होला’, शक्ति भन्छन्, ‘तर, अहिले जसरी समर्पित भएर सङ्गीत साधनामा चाहिँ हुने थिएँ कि थिइनँ !’
त्यसबेला गीत बज्ने माध्यम एउटै मात्र रेडियो नेपाल थियो । एउटा गीत रेकर्डबापत जम्मा २० रुपैयाँ पाउँथे उनले । वर्षमा कति नै गीत रेकर्ड हुन्थे र !
अरू आम्दानीको बाटो थिएन । जागिर पनि नभएको भए उनले भनेझैँ कि घर गएर बाबुबाजेको बिँडो थाम्ने वा अन्य कुनै पेसा, जागिर गर्ने मात्र विकल्प थिए ।
शक्तिको परिवार नेवार परिवार । नेवारका घरमा मादललगायत केही बाजा हुने नै भए । उनका काका आफैँ पनि लोक गायक । गाउँघरमा भजन गाउने त स्थापित चलन नै थियो ।
शक्ति पनि काका, बाबुहरूसँगै विभिन्न भजन र साङ्गीतिक कार्यक्रममा जान्थे । त्यहीँ जानीनजानी काकाहरूसँगै गीत र भजनमा भाका हाल्थे ।
‘तिनै गाउँघरमा हुने भजन र गायनले सङ्गीततिर तान्यो’, शक्ति भन्छन्, ‘पछि विद्यालय जान थालेपछि अलिक गति लियो मादल बजाउने र लोकगीत गाउने क्रमले ।’
उनले त्यसबेला नै केही साङ्गीतिक प्रतियोगितामा भाग लिए, कतिपय सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा गाउने, बजाउने पनि गरे ।
उनका काका लोकगायक नारायणभक्त श्रेष्ठ राम्रा गायकमा गनिन्थे । काकासँगै शक्तिले ड्युएट गीत पनि गाए । ‘मेरो स्वर सानो, महिलाको जस्तै थियो’, शक्ति भन्छन्, ‘काका केटा, म केटी बनेर पनि गायौँ ।’
आफ्ना काका नारायणभक्तलाई नै पहिलो साङ्गीतिक गुरु मान्छन् शक्ति ।
तर, शक्तिको औपचारिक साङ्गीतिक यात्रा भने पाटन क्याम्पसमा पढ्न आएपछि सुरु भयो । त्यसबेलाको सिनेमा हल अशोक चलचित्र मन्दिर पाटन क्याम्पसका विद्यार्थीका लागि पहिलो गन्तव्य थियो, मनोरञ्जनको ।
उनीलगायत उनका साथीहरू अशोक सिनेमा हलमा चलचित्र परिवर्तन हुनवित्तिकै पहिलो शो हेर्न पुग्ने होडबाजीमा हुन्थे । त्यहीँ वरपर बेच्न राखिएका हिन्दी चलचित्रका गीतका किताब किन्थे शक्ति अनि कोठामा आएर ती गीत गाउने प्रयास गर्थे ।
‘चलचित्रमा हेरेको र रेडियोमा सुनेको आधारमा ती गीतहरू गाउने प्रयास गर्थें’, शक्ति भन्छन् ।
उनी जब क्लासमा टेबल ठटाउँदै ती हिन्दी गीत गाउन थाल्थे, उनका साथीहरूले उनलाई हौस्याउँथे- ‘आहा, क्या गज्जब गायौ’ भनेर ।
साथीहरूको उक्त प्रोत्साहन पनि शक्तिको साङ्गीतिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण रह्यो । ‘ती साथीले प्रोत्साहन नगरेका भए म यतातिर निरन्तरता दिन्नँ पो थिएँ कि !’, शक्ति भन्छन्, ‘नायक तथा गीतकार प्रकाश अधिकारी जस्ता साथीको हौसला अविष्मरणीय छ ।’
उनले प्रकाशकै उक्साहटमा सङ्गीत सिक्न थाले । गितार बोकेर हिँड्न थाले बजाउँदै ।
उनले गीतार बोकेको देखेर अरूले सारङ्गी बोकेर हिँडेछ, सितार बोकेर हिँडेछ भन्थे रे !
उनले त्यसबेलै गितारमा कर्ड हान्दै कम्पोज गरे उनै प्रकाशको कविता । त्यही कविता उनले कम्पोज गरेको पहिलो गीत बन्यो ।
सिकारु समयकै उनको कम्पोजको गीत थियो- ‘आफैँलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी ।’ उक्त गीत गाए रविन शर्माले, २०३३ सालतिरै तर २०३७ सालमा आएर मात्र उक्त गीत रेकर्ड भयो ।
त्यसबेला रत्न रेकर्डिङ संस्थानले ‘प्रतिभाको खोजी’ नामक साङ्गीतिक प्रतियोगिता गर्थ्यो । उनले पनि त्यसमा भाग लिए । राजेन्द्र पौडेलको शब्दको गीत दोस्रो भयो । त्यसबेला पुरस्कृत हुने गीत निःशुल्क डिस्कमा रेकर्ड गर्न पाइन्थ्यो । गीतकार, सङ्गीतकार र गायक, गायिकाले १ सय ५० रुपैयाँका दरले पुरस्कार पनि पाउँथे ।
उनको यो गीत त्यहीबेला रेकर्ड भयो, डिस्कमा ।
शक्तिको पहिलो रेकर्डेड गीतचाहिँ डा. दीर्घसिंह बमको शब्द र प्रताप अधिकारीको स्वरमा रहेको ‘सम्झनै सम्झना थियो’ बोलको गीत हो, जुन २०३५ सालमा रेकर्ड भयो रेडियो नेपालमा ।
‘त्यसबेला रेडियो नेपालमा रेकर्ड हुनु भनेको गायक, गीतकार, सङ्गीतकारको औपचारिक मान्यता पाउनु थियो’, शक्ति भन्छन्, ‘यसपछि म सङ्गीतकारको सूचीमा दर्ज भएँ ।’
उनले हालसम्म करिब १ हजारको संख्यामा विभिन्न शैलीका गीत र गजलमा सङ्गीत गरिसकेका छन् ।
आधुनिक गीतबाट औपचारिक सङ्गीतयात्रा सुरु गरेका शक्तिले गजलमा पनि सङ्गीत गरेका छन् ।
२०४० को दशकतिर जब नेपालमा गजलको पुनर्जागरण हुँदै थियो, त्यसबेलै उनले अब नेपाली गजललाई सङ्गीतमा ल्याउन जरुरी भएको महसुस गरे ।
त्यहीबेला हिन्दी, उर्दूका गजल गायनका मसिहाहरूको नेपाली सङ्गीत पारखीमा प्रभाव परिरहेको थियो । ती गजल गायक, गायिकाका विभिन्न कार्यक्रम हुने गर्थे ।
‘त्यसकै प्रभाव होला, ममा गजलमा सङ्गीत गर्नुपर्छ भन्ने बोध भयो’, शक्ति भन्छन्, ‘गजल के हो भन्ने नै प्रस्ट थिएन त्यो बेला । गजललाई पनि गीत नै भनिन्थ्यो ।’
तर, गजलको एल्बम भने उनले २०५० सालमा आएर मात्र निकाले- ‘गजल’ नाममै । उनको उक्त एल्बम नेपाली गजलको पहिलो एल्बम भएको बताउँछन् ।
उक्त एल्बममा आदिगजलकार मोतीराम भट्टदेखि ललिजन रावल, प्रकाश अधिकारी, राजेन्द्र पौडेल, रत्नशम्शेर थापालगायतका गजल समावेश गरेको उनी बताउँछन् ।
उनको गजल सङ्गीतप्रतिको मोह अझै बढ्यो । २०६० सालमा आएर उनले ‘सप्तक’ नामक गजल एल्बम बजारमा ल्याए । त्यसमा ज्ञानुवाकर पौडेल, बूँद राना, मनु ब्राजाकी, ललिजन रावल, कालीप्रसाद रिजाललगायतका रचना समावेश छन् । उनले ७ वटा गजलका एल्बम बजारमा ल्याइसकेका छन् ।
चलचित्र सङ्गीत : एक दशक एकछत्र
शक्तिको बहुआयामिक साङ्गीतिक व्यक्तित्व आधुनिक गीत र गजलमा सीमित रहेन, उनले २०४७ सालदेखि नेपाली चलचित्र सङ्गीतमा पनि उपस्थिति जनाए । उपस्थिति जनाए मात्र होइन, करिब एक दशक नेपाली चलचित्र सङ्गीतमा एकछत्र राज गरे ।
चलचित्र ‘आँधीबेहरी’मा पहिलो पटक सङ्गीत गरेका शक्तिले त्यसयता कहिल्यै रोकिनुपरेन । त्यो एक दशकका अधिकांश नेपाली चलचित्रका ‘सुपर हिट’ अथवा अतिलोकप्रिय र चर्चित गीतका सङ्गीतकार उनै शक्ति बल्लभ भए ।
उनले पहिलो पटक सङ्गीत गरेको चलचित्र आँधीबेहरीको गीत ‘उडूँ कि गुडूँ म, ए चरी सरर उड्न सिकाइदेऊ’मा सङ्गीत गर्दा उनलाई निकै सकस परेको सुनाउँछन् । पहिलो पटक चलचित्रको गीतमा सङ्गीत गर्ने काम उनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
‘पहिलो गीतमै असफल भइने हो कि भन्ने पीर त हुने नै भयो’, शक्ति भन्छन्, ‘चलचित्रका गीतमा सङ्गीत गर्दा कलाकारको मुड र परिवेश पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
तर, गीत साँच्चै सुन्दर बन्यो । त्यही गीत वर्षौंसम्म नेपालीहरूका कानमा गुञ्जिइरह्यो । आज पनि उक्त गीत सदावहार गीतका रूपमा रहेको छ ।
यसपछि शक्तिलाई लाग्यो, गीत त चलचित्रमा गर्नु मज्जा रहेछ । स्वतन्त्र गीतहरूप्रति भन्दा उनको रुचि चलचित्रका गीततर्फ बढ्यो ।
‘चलचित्रका लागि लेखिएका गीत परिवेश, पात्र र घटनामा जोडिएका हुन्छन्’, शक्ति भन्छन्, ‘यो सजिलो काम पक्कै होइन तर मलाई भने यसरी बाँधिएर गरिने गीतमै पो आनन्द र सहज महसुस हुनथाल्यो ।’
उनले हालसम्म ३ दर्जनजति नेपाली चलचित्रका गीतमा सङ्गीत गरिसकेका छन् । उनले सङ्गीत गरेका केही नेपाली चलचित्रका गीत साँच्चै सदावहार नै छन् । जस्तो कि ः
चलचित्र ‘सिमाना’का ‘उकाली ओराली गर्दै’ र ‘फूलको डालीडालीमा’, चलचित्र ‘चोखो माया’का ‘सप्तरङ्गी फूलै फुल्यो’ र ‘चुमेर सुगन्धी फूल’, चलचित्र ‘प्रतीक्षा’को ‘दुई चुल्ठी बाटेर’, चलचित्र ‘पृथ्वी’का ‘जानी नजानी तिमीले के दियौ’, ‘खुसी छु म आज’ र ‘फूलफूलमा पातपातमा’, चलचित्र ‘पराईघर’को ‘बिहानी पहिलो किरणसरि’ उनका लोकप्रिय र चर्चित गीत हुन् ।
यसरी नै शक्तिले ‘आफैँलाई भार भयो’, ‘खोलावारि खोलापारि’, ‘म पनि त कुनै आसमा अल्झिदिएछु’, ‘ऐनै ऐनाको रहेछ यो मेरो घर’, ‘लाग्छ मन हेरिरहूँ’, ‘रक्सी बेचेँ, आलु बेचेँ’, ‘सारङ्गी त रेटे पनि’ जस्ता कर्णप्रिय आधुनिक गीतहरूमा पनि धून भरेका छन् ।
गायक सोनु निगमलाई चलचित्र ‘सिमाना’का उल्लेखित २ गीतबाट नै गायनमा डेब्यू गराएको पनि बताउँछन् शक्ति । ‘सोनु कतै अर्कै काममा अल्झिइरहेका थिए’, शक्ति भन्छन्, ‘ती गीतमा मोहम्मद रफीको जस्तो आवाज चाहिने, उनको आवाज सुट गर्नेजस्तो लागेर उनलाई गाउन लगाइयो । राम्रा भए दुवै गीत ।’
४ दशकभन्दा लामो आफ्नो साङ्गीतिक यात्रामा शक्तिले गालीभन्दा ताली बढी पाए । गाली त उनले पाएका भए पनि सम्झिएका छैनन् ।
‘यति धेरै माया पाएको छु श्रोताबाट कि मलाई कसैले गाली नै गरेको भए पनि ती सम्झिएको छैन’, शक्ति भन्छन्, ‘मैले श्रोताले दिनुभएको ताली, माया र सद्भाव भने सधैँ सम्झिइरहेको छु ।’
यस अवधिमा शक्तिले विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट विभिन्न समयमा विभिन्न सम्मान, पदक र पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
उनले हालसम्म नारायण गोपाल युवा सङ्गीत पुरस्कार, छिन्नलता गीत पुरस्कार, म्युजिक नेपाल अवार्ड, प्रबल गोरखा दक्षिण बाहु, राष्ट्रिय चलचित्र सम्मान, मोतीराम-सेतुराम गजल पुरस्कार, नातिकाजी विशेष सङ्गीत सम्मान, विन्ध्यवासिनी सङ्गीत सम्मान, विन्ध्यवासिनी लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डलगायत ४ दर्जनजति सम्मान, पदक र पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
‘यी मेरा अमूल्य सम्पति हुन्’, शक्ति भन्छन्, ‘मैले नेपाली सङ्गीतमा गरेको लगानी फर्किएर हेर्दा लगानीभन्दा प्राप्ति बढी भएको ठानेको छु ।’
गायक बन्न सङ्गीत सिकेँ, सङ्गीतकार बनेँ
शक्ति खासमा गायक बन्न चाहन्थे । सानैमा काकासँग गाउँघरमा गीत गाउँदै आएका उनमा राम्रो गायक बन्ने इच्छा थियो । तर, उनी भए प्रसिद्ध सङ्गीतकार ।
उनले गायक बन्नकै लागि शास्त्रीय सङ्गीत पनि सिके । तर, विस्तारै उनको गायनप्रतिको मोह हराउँदै सङ्गीततर्फ मोडियो । जब उनले सङ्गीत गरेका एकपछि अर्को गीत लोकप्रिय बन्दै गए, उनले आफूलाई गायनमा भन्दा सङ्गीतमा अब्बल हुने देखे ।
‘एकातिर जागिर छँदै थियो, सङ्गीत, लेखन र गायनमा समेत लाग्दा त म कुनैमा पनि सफल बन्दिनँ भन्ने लाग्यो’, शक्ति भन्छन्, ‘एउटै विधामा केन्द्रित हुनु राम्रो ठानेँ ।’
उनले हालसम्म पुराना गायक बच्चु कैलाश, प्रेमध्वज प्रधान, योगेश वैद्य, रुवी जोशीदेखि नयाँ पुस्ताका प्रमोद खरेल, रूपक डोटेल, मिलन अमात्यसम्मलाई आफ्नो सङ्गीतमा गवाएका छन् ।
उसो त उनले गायनबाट लगभग हराउँदै गएका रुवी जोशी, सीपी लोहनी, जगतमर्दन थापालाई पुनः गायनमा ल्याउने काम पनि गरे ।
हालसम्म २ दर्जन आधुनिक गीति एल्बम, ७ वटा गजल एल्बम, ७ वटा राष्ट्रिय गीतका एल्बम, ३ वटा बालगीतका एल्बम र एउटा भजन बजारमा ल्याइसकेका शक्ति नेपाली सङ्गीत क्षेत्रकै शक्ति मानिन्छन् ।
आगामी दिनमा पूरा समय नेपाली गीत, सङ्गीतको श्रीवृद्धिका लागि समर्पित गर्ने सोच रहेको शक्ति बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १७, २०७७, १३:१७:००